Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha oo khudbad ku saabsan tamarta ka jeediyay Machad TAIHE +Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha oo khudbad ku saabsan tamarta ka jeediyay Machad...
Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha oo khudbad ku saabsan tamarta ka jeediyay Machad TAIHE +Sawirro
Danjire Cawaale Cali Kullane safiirka Soomaaliya ee Shiinaha ayaa qudbad ku saabsan tamarta ka jeediyay machad TAIHE ee Shiinaha.
Danjiraha ayaa qudbaddan ka jeediyay dood-cilmiyeed oo soo abaabulay mahadka Taihe ee Shiinaha ayaa waxaa cinwaankeedu ahaa “Mas’uuliyadda iyo Fursadaha – Xoogga Teknolojiyadda ee kordhinta waxa ka dhasha Kaarboonka iyo isku dheelitirka Kaarboonka”
Doodaas oo ay kasoo qayb galeen madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha oo ka mid ahaa Kaaliyihii hore ee Arrimaha Dibadda Shiinaha Danjire Wu Hailong, sidoo kalena waxaa goobjoog ahaa Danjiraha Indonesia ee Shiinaha.
Danjire Cawaale Cali Kullane ayaa soo bandhigay awoodda weyn ee tamarta nadiifka ah ee Soomaaliya leedahay wuxuuna xoojiyay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xakameynta kuleylka adduunka heshiiskii lagu gaaray Paris ee ahaa 1.5 iyo 2.0 darajo boqolkiiba.
Mahadka Taihe ayaa ka mid ah macaahidda ugu muhiimsan ee aruuriya Cilmi-baarista isagoo caalamkana usoo bandhiga natiijooyinka laga helo cilmi baarista si aduunka nolol caafimaad ah ugu noolaado.
Previous articleArday baratay farsamooyinka gacanta oo tababar loogu soo xiray Dhuusamareeb “SAWIRRO”
Next articleRW Rooble oo shaqada ka joojiyey Fahad Yaasiin Agaasime cusub-na u magacaabay NISA